Hordhac Kooban, ka dibna sii wado sheekadii inoo socotay!!! Prof- Cabdi Ali Jamac | Hangool News
Hordhac Kooban, ka dibna sii wado sheekadii inoo socotay!!! Prof- Cabdi Ali Jamac
Waxa saaxiibadii u bateen in aan wado sheekada, inkastoo ay jiraan dad leh uma fiicna mustaqbalkaaga siyaasadeed; way mahadsan yihiin saaxiibadaasi; laakiin waxan u sheegi lahaa in aan doonayo in aan beddelo sida aynu uga fikirno siyaasadda iyo cidda awoodda kolba haysa; anigu wax sir ah oo halkan aan ku sheegay ma jirto; waa sheeko caadi ah; hana moodin in aan wax walba sheegay oo aan yara waashay!!!!; ninka aan ogolayn in intaas oo kale aan ka qoro, yaanu waligiiba i magacaabin; mana rabo in aan kaas la shaqeeyo; nin diidan in laga sheekeeyo waxa jira, oo aan u arko in ay muhiim u tahay ummadda la xukumayo; dadku xaq bay u leeyihiin in ay fahmaan sida madaxdoodu u fikirto ama u maamusho iyo qof kasta oo madaxa dabeecadihiisa!!!
Laba arrimood ayaan ugu baaqayaa dadka masuuliinta ah ee la shaqeeya madaxweynayaasaha, kan immika iyo kuwa soo socdoba; walaalayaal si aynu u xorowno ugana baxno gumaysiga iyo gumaynta cidda aynu kolba m/weyne u doorano, laba hal ha la ogaado, oo ninka m/weynaha ahina ha ku xisaabtamo; waa ta kowaade, in masuulku is casili karo markuu wax qoonsado; iyo ta labaad, in aad wax ka qori karto habkii hawlaha loo waday daaha dabadiisa; bi’i waaye halkaad ka leedihiin Cabdaw yaa ku aaminaya mustaqbalka ee ku magacaabaya, waar ha ogaado ninka meesha haystaa, oo yaan daah ka saaraan, oo ha ku xisaabtamo in aad iska tagi karto, waxna ka qori karto ; adigoon masabidayn, beena ka sheegayn; maxaa yeelay taasi waa gunnimo iyo daciifnimo.
Waa in labadaa arrimood noqdaan wax caadiya oo uu ku xisaabtamo ninka madaxweynaha ahi, si uu isu ilaaliyo; haddii aad taas diidaan, anigu dariiqaas baan doortay; waxanan ku hadhayaa Ilaahay iyo dadka, ee idinku ku hadha M/weynaha kolba jooga!!!! Maalin uun baa heli M/weyne isku kalsoon oo aniga i magacaaba, haddii aniguba aanan noqon ka wax magacaabaya!!!! Haddi kalena, halkan ba hawsha waan ka wadi; wacyigalinta iyo toosinta hab-dhaqan siyaasadeedka dadkayga!!! Waraabe dhankii loo eryaaba waa u toos; saw awalba dadka uun looma shaqaynayn!!!
Reeraha kale ee Habar-awal ama Isaaq ama Samaroon ama Harti iyo dhammaan reeraha kale ee Somaliland , raali ha ka noqdaan haddaan ku dhego-barjeeyo tafaasiil hoose oo la xidhiidha reerka aan ka soo jeedo; dhinaca kale waxay idiin noqon kartaa Model; waxa laga yaabaa in sawirku sidaa u egyahay reerkiina dhexdiisa; markaa adna bal soo axadh, oo aan isula nimaadno xalka!!
Waxan u galnay sida Sacad Muse wax loogu qaybiyo; Waxan ku idhi: Madaxweyne, shaxdii way kaa qaldantay (oo waliba anigu aan qabo in shaxdaasi aanay reeraha u caddaalad samaynayn), laakiin isagu uu ku shaqeeyo, waliba aan ku ogaa isagoo ku ad-adag; nasiib darrose aan ku hayo maanta isagoo ka leexday!! markaa waxan u jeeday arrinkaagu ma la jiifiyaana bannaan-baa (inconsitantancy), si aan ugu xidho xadhkihiisa iyo iskuulkiisa laga fiican yahay ee waliba haddana uu sii qalloocinayo, oo haddii aan la qallocin lahayn, lagu meel gaadhi kari lahaa inta laga guurayo ee aynu xal u helayno bahashan qabyaaladda ah!!!
Si aan ugu xidho isla xadhkihiisa iyo isla fikirka iskuulkiisa, waxan ku idhi, oo aan xasuusiyay waqti sidaa aan u fogayn oo uu noo diray aniga iyo Bakayle iyo rag kale in aanu xilal-ka kaambaynka u qaybino reeraha Sacad Muse Bari; sheeko dheer bay ahayde, waxa dhacday in xilalkii oo saddex ahaa gaadhi waayeen reerihii; waa la isu tanaasuli waayay; haddaba si aanay u noqon in mar walba ay xilalka isku taxaan saddexda ugu tug-tugta roon (waxba la isma dhaamee) ee Yaausf, Makaahiil iyo Cabdalla Sacad; waxa dhacday in Yaasuf u tanaasulay Adaraxman Sacad.
Arrinkii ayaanu u geynay aniga iyo Bakayle; waxanu u sheegnay sida ay wax u dhaceen; wuxu yidhi yaa idinku yidhi sidaas baa wax loogu qaybiyaa Sacad Muse; wuxu yidhi hadal nuxurkiisu ahaa, Sacad Muse waa Bari iyo Galbeed; reer Gabiley iyagu gooni baynu waxoodii u siinay, oo meesha kuma jiraan, intan aan idiin diray waa intii Sacad Muse Bari, haddaba aan idiin sheegee, Sacad Muse Bari waa Xuseen Abokor iyo inta kale (Baho sacad); markaa isagu Baho Sacad ma odhanayo, laakiin aigaa ka maarmi waayay, waayo ma jiro magac kale oo ii soo koobaya reeraha aan ahayn Xuseen Abokor; wuxu yihdi markaas, Xuseen Abokor iska dhaafa oo waxba ha siinina, ileyn anigiibaa ka soo jeedee; kollay Mayarka (Soltelco) ayaynu ku soo dari marka danbe oo dhib malaha’e (waxan ka cudur daaranayaa in aanan sheegi karin sababtuu u yaabay markuu ogaaday sidan u fahansanahay nidaamka wax qaybsiga; illeyn isaga ayaaba casharkan noo dhigaye!!!!).
Intan soo hadhay oo noqonaysa Baho sacad (ma aha Baha sacaddii Muse nebcayd ayaamihii halganka ee ka tirsanayd garabka A/raxman Tuur, ee waa Baha Sacad maanta Muse dooranaysa oo maalgalinaysa!!!!), wuxu yidhi sida wax loogu qaybiyo miyaad taqaaniin; wuxu yidhi: one iyo two waxa isu ah Makaahiil iyo Yaasuf (mase sheegin ka one-ka ah), three-ga waa Cabdalla Sacad; Adaraxman-kana waa la is raaciyaa; markaa saddexda kursi kala siiya Yaasuf, Makaahiil iyo Cabdalla Sacad; sidaas buu yidhi isagoo na canaanaya oo leh waxba garan maysaan; annana waxanu ku nidhi, dee miyaad noo sheegtay!!. Si kastaba ha ahaatee, arrinkaasi wuu nagu adkaaday oo waanu liqi kari waynay!!!, waxanu ku nidhi markaas, Guddoomiye ceeb baa imanaysa haddii aanu ku noqono Adaraxman Sacad oo aanu ku nidhaahno arrinkii guddoomiyihii ayaa beddelay; go’aankan shir il-yartu is qabatay ayaa lagu gaadhay, ee sidee wax noqonayaan?!!! Waxa iga yaabiyay mabuu digigixan!!!; manu kayr-kayrin!! (what a political conviction!!! I wondered so much), waxanu yidhi waar dhegaysta oo ordoo saddexdaa kala siiya, isagoo u jeeda Makaahiil, Yaausuf iyo Cabdalla Sacad; kolkaa waxan maalintaas ogaaday in aan halkaas kala iskuul nahay Odayga ( qabyaaladda Alle ina baday gudaheeda!!!!), oo aniga iskuulkaygu waxa weeye in Adaraxman Sacad iyo Yaasuf u siman yihiin xilka wasiirnimo ama wixii kale ee la qaybsanayo; si kale waxa ina xukumaya qofka inaga maraya maalintaas, reerku doono ha ahaadee!!!
Habeenkaas indhahaa i soo baxay, waxan is idhi talaw ma riyaa waxani mise waa dhab!!!!; waxan ugu daray sheekada habeenkaas markii aanu warbixinta siinaynay in wakiilkii u fadhiyay Makaahiilku uu diiday inuu tanaasulo; taasoo kalliftay in markii danbe Yaasuf i is xil-qaamaan oo u tanaasulaan Adaraxman Sacad; waxan ka yaabay jawaabtii uu bixiyay oo ahayd way sax san yihiin qolada Makaahiilka u hadlaysay, mana aha in ay u tanaasulaan!!! waa maalintaan ogaaday in Muse iskuulkan ilaahay ina baday ee dhaqan qabyaaladeedka uu yahay waliba midigta fog; markan sidaa leeyahay waxan u jeedaa iskuulka eegaya kaliya faraha reeraha ee qiyaasta ku dhisan!!! Yaa og tirada reeraha; anigu waxan ogahay in Adaraxman, Yaasuf iyo Makaahiilba degaan illaa Saaxil; aniga laftayda ayaa ka soo jeeda Yaasufka Saaxil; waa Kuul Axmed, halka Cabane Axmed oo ay walaalo yihiin iyo reer Liibaan ama Yaasuf-ka kalena udubkoodu ka bilaabmo duleedka Hargeysa Illaa Ehtiopia gundhadeeda; Anigu waxan ku dhashay Buurta ugu quruxda badan ee dawga Sheikh ee dalxiiska iyo daawashada loo tago hoosteeda ama Hudisa iyo Laalays dhexdooda (Barasho wanaagsan, saaxiibayaal)!!!
Waan faah-faahin doonaa, laakiin tii aan kaga gar helay , haddaan nuxurkeeda idiin sii qaddimo waxa weeye illeyn anigu iskuulkaa midgta fog ma ahiye; wuxu ahaa nuxurku waar immika Makaahiil iyo Cabdalla Sacad baa xilalka wasiir iyo wasiir ku xigen ka hayay dawladddii Siilaanyo’e, dee doorkan waxa lahaa Yaasuf iyo Adaraxmaan Sacad; waliba Yaasuf xataa iskuulkaaga haddii la raaco( Faraha qiyaasta ku dhisan) isagaa leh wasiirnimada; markaa Yaasuf bal arrinkiisaa meel saar, iskuul kasta qaadoo!!! Miyaanad qaldin shaxda!!! , dee markaan u soo qaatey sidii uu guddiga Kambaynka u qaybiyay iyo hadalladiisiina jiq bay ku noqotay, Waxanu toos iigu yidhi: Waan ka garaabayaa, Qalad baa dhacay!! Waan uga mahad celinayaa M/weynaha arrikaas!!!!a
Waxba kale oon ku idhi anigoo tusaya in aan kala iskuul ama madhab nahay, M/weyne anigu waxan qabaa nin karti iyo aqoon leh oo Adaraxman Sacad ah in laga dhigi karo wasiirka, wuxu iigu jawaabay: jaw, waar balaayo ayaa hortaagan; waxan ku idhi balaayona ma hortaagna, saw annaga ma aha, wuu na matali karaa ninka Adaraxman; rutiina ma jiro Baho Sacad baad sheegtee, nin Sacad Muse ah oo hadli karaa ma jiro!!
Waxan sidaa u leeyahay, illaa intii waddanka la soo galay waxa jagada wasiirnimada Baho Sacad isu beddelayay Yaasuf, Makaahiil iyo Abdalla Sacad. Makaahiilka waxan xasuustaa Iskeerse, Cadari iyo Guri barwaaqo oo immika jooga; Yaasuf-ka Dr Ahmed Hashi, Abshir Ahmed Hassan iyo Prof maxamed Dhanbaal; Cabdalla sacad-ka waa Fariid, Yusuf Maygaag, Ina Muse Diiriye.
Sidan hore u idhi Jabba waa ka danbeeyee, markaan Formaladii reerka aan isla saxnay, ayaan bilaabay in aan ka hadallo taydii; aad baan u diyaarsanahay; waxan sitaa Plan A iyo Plan B; La soco….
Dee waa buug dhan/e, intaa wixii ka danbeeya ka warrama haddaan buug ka dhigo oo aan soo daabaco; aniga laftarkayguna camal baan ka dhigan lahaaye?!!!